Umklamo WeBlackmagic Umemezela I-ATEM yokusakazwa okusha | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Umklamo WeBlackmagic Umemezela iBhuloho elisha le-ATEM yokusakaza
Umklamo WeBlackmagic Umemezela iBhuloho elisha le-ATEM yokusakaza
IFremont, CA, e-USA - ngoLwesine, Julayi 30, 2020 - I-Blackmagic Design namuhla umemezele i-ATEM Streaming Bridge, isiguquli esisha esinquma ukusakazwa bukhoma kusuka kunoma isiphi isishintshi se-ATEM Mini Pro bese siyiguqula sibuyele ku-SDI futhi I-HDMI ividiyo. Ubuhle be-ATEM Streaming Bridge abasakazi bangayisebenzisa ukuxhuma izixhumanisi zevidiyo ezisezingeni eliphakeme ngqo kusuka kunoma yisiphi isitudiyo se-ATEM Mini Pro. Lokhu kuvumela abasakazi ukuthi bakwazi ukuthola amakhono anhlobonhlobo, emhlabeni jikelele. Ukusakazwa kwevidiyo kwe-ATEM Mini Pro kuyikhwalithi ephakeme kakhulu kunesoftware elula yenkomfa, ngakho-ke amakhasimende athola ikhwalithi yokusakaza, ahlanzekile kunoma iyiphi i-logo yomthengisi wesoftware yokusakaza.
I-ATEM yokusakaza Bridge izotholakala ngo-Agasti kusuka I-Blackmagic Design abathengisi emhlabeni wonke nge-US $ 245.
I-ATEM Streaming Bridge iyisiguquli sevidiyo esivumela amakhasimende ukuthola ukusakazwa kwe-H.264 kusuka kunoma iyiphi i-ATEM Mini Pro bese eyiguqula ibuyele ku-SDI futhi I-HDMI ividiyo. Lokhu kusho ukuthi amakhasimende angathumela ividiyo ezindaweni ezikude ezungeze inethiwekhi yendawo ye-Ethernet, noma nge-inthanethi emhlabeni jikelele. Lokho kungenzeka ngoba isebenzisa ama-codecs we-H.264 athuthukile ngekhwalithi ephezulu ngamazinga wedatha aphansi kakhulu. Cabanga abasakazi nama-blogger basebenzisana emibonisweni futhi bakhe amanethiwekhi womhlaba wonke wezitudiyo ezikude ze-ATEM Mini Pro. Ukusetha kulula njengoba insiza yesoftware ye-ATEM ingadala amafayela wokusetha amakhasimende angathumela i-imeyili kuwo kuma-studio we-ATEM Mini Pro akude. I-ATEM Streaming Bridge iyindlela ephelele yokusebenzisa i-ATEM Mini Pro njengesitudiyo esikude sokusakaza.
Abashintshi be-ATEM Mini benza kube lula ukudala ukwenziwa kwamakhamera amaningi ngobuchwepheshe ekusakazeni bukhoma ku-YouTube nezethulo zebhizinisi ezintsha kusetshenziswa i-Skype noma i-Zoom. Mane uxhume i-ATEM Mini futhi amakhasimende angashintsha bukhoma phakathi kokufakwayo kwekhamera ephezulu yevidiyo engu-4 yezithombe ezingcono kakhulu. Noma xhuma ikhompyutha yamaslayidi e-PowerPoint noma imidlalo yokududuza. Okwakhelwe ku-DVE kuvumela isithombe esijabulisayo kwimiphumela yesithombe, sikulungele ukuphawula. Kunemiphumela eminingi yevidiyo nayo. Zonke izinhlobo ze-ATEM Mini Pro zinokusakazwa bukhoma okungasetshenziswa ukuxhuma ngqo ku-ATEM Streaming Bridge. Kukhona futhi I-HDMI nikhokhela ama-projektha. Ukufakwa kwe-Microphone kuvumela ideskithophu ephezulu yekhwalithi nama-lapel mics ezingxoxo nezethulo.
“Lesi yisiguquli esimnandi njengoba sivumela abasakazi ukuthi bahlangane nethalente lomhlaba wonke lababhlogi bama-blog abanezitudiyo ze-ATEM Mini Pro. Isixhumanisi sokusakazwa siyikhwalithi yokusakaza ngakho-ke ama-blogger akudingeki amukele isoftware yekhwalithi ephansi enophawu olushiswe ngaphakathi. I-ATEM Streaming Bridge nayo ingasetshenziswa kwinethiwekhi yendawo ngakho isebenza njengesiguquli se-IP futhi amakhasimende angaxhuma kumathelevishini amakhulu futhi ama-video projectors ezindaweni zomphakathi. ” kusho uGrant Petty, I-Blackmagic Design Umphathi omkhulu. “Ngicabanga ukuthi lokhu kuzojabulisa kakhulu. Cabanga nje umhlaba wezitudiyo ze-ATEM Mini Pro ezinenethiwekhi kanye nabasakazi bonke abaxhuma ndawonye ngekhwalithi yokusakaza! Yeka ukuthi kungaba umhlaba omuhle kanjani lowo! ”
I-ATEM yokusakaza Bridge izotholakala ngo-Agasti ngo- US $ 245, ngaphandle kwemisebenzi, kusuka I-Blackmagic Design abadayisi emhlabeni jikelele.
Izithombe zomkhiqizo ze-ATEM Streaming Bridge, kanye nazo zonke ezinye I-Blackmagic Design imikhiqizo, iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
Ngaphambilini: I-Blackmagic Design Imemezela I-ATEM Mini Pro ISO entsha
Olandelayo: Iziteshi Zedade TV ezisebenzela i-NYC / NJ Area Khetha i-PlayBox Neo ye-Playout ne-Channel Brark